Ikhaya kwiCooza Comfy Private kunye nokutshona kwelanga okuhle - I-Airbnb
Ikhaya kwiCooza Comfy Private kunye nokutshona kwelanga okuhle
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguKevin
Wamkelekile kwiBungalow yethu kwiCove. Siphezu koMlambo iCoosa uya kuba nokufikelela ngokupheleleyo ekhaya. Indawo yokupaka yabucala yemoto yakho kunye nesikhephe sakho. Sinayo irempu yesikhephe kwipropathi enedokhi yokubopha isikhephe sakho ngexesha lonyaka. Simalunga nemizuzu eyi-10 ukusuka eDowntown Gadsden naseRainbow City. Indawo ezolileyo kakhulu iimbono ezintle zokutshona kwelanga ukusuka kwiveranda egqunyiweyo onokuthi uhlale kwaye uphumle. Enkosi ngokuqwalasela ukuhlala kwakho nathi. UKevin kunye noBeth
Igumbi lokulala elihle elinekhitshi eligcweleyo, itafile yepool, igumbi lokuhlala elinebhedi enkulukazi kunye nebhafu epheleleyo. Xa ngaphakathi kukho umbono ovulekileyo wekhaya. Okuthetha ukuba iinyawo ze-13 ukuphakama kunye neendonga zeenyawo ezi-8. Ayinasandi !!
50" HDTV ene-intambo yepremiyamu, I-HBO Max, I-Hulu, I-Disney+, I-Netflix, I-Roku, I-Amazon Prime Video, I-Chromecast, I-Apple TV
Ubumelwane buncinci kakhulu ngenxa yokuba lo ngumqolomba ophuma kwindlela enkulu yamanzi. Sonke singabadla umhlala-phantsi ababelana nge-easement efanayo (i-driveway) amakhaya apheleleyo kwi-cove ilinganiselwe kumakhaya ali-9.
I-bungalow likhaya leendwendwe elihlala kwipropathi yethu kwaye ngokwenyani sikumnyango osecaleni. Siza kunceda ukubeka isikhephe sakho ukusuka ekuqalisweni kwethu kwesikhephe. Akukho sikhephe, akukho ngxaki, ukhenketho olubukekayo lunokongezwa ngentlawulo eyongezelelweyo ngexesha lonyaka. Umrhumo kukuhlawula igesi kwiphenyane kunye ne-ware kunye ne-tare yesikhephe. Ukulungiselela ukhenketho qhagamshelana nje noKapteni uKevin.
I-bungalow likhaya leendwendwe elihlala kwipropathi yethu kwaye ngokwenyani sikumnyango osecaleni. Siza kunceda ukubeka isikhephe sakho ukusuka ekuqalisweni kwethu kwesikhephe. Aku…